American Grade 12 Program (GAC) - Crown Education
American Grade 12 Program (GAC)
(၁၂)တန်း ပညာရေးစနစ်ဖြစ်သည့် American Grade 12 Program( Global Assessment Certificate) ကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု IOWA ပြည်နယ်အခြေစိုက် ACT,INC. နှင့် မြန်မာနိုင်ငံမှ CROWN Education/Royal Academic Institute တို့နှင့် ပူးပေါင်းစီစဉ်ကာ၂၀၁၃ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလတွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သော စက်တင်ဘာလ ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှစပြီး ယခုလက်ရှိ နိုဝင်ဘာလ ၂၀၁၈ ခုနှစ်အထိ (၅)နှစ်ကျော် ကာလအတွင်း Batch (13) အထိ ဖွင့်လှစ်ထားနိုင်ခဲ့ပြီး ကျောင်းသားဦးရေ (၃၀၀) နီးပါး သင်ကြားမွေးထုတ်ကာ၊ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးတွင်၊ တက္ကသိုလ်တိုက်ရိုက်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ ပညာသင်ဆုများနှင့် လည်းကောင်း၊ ပညာလေ့လာသင်ယူဆည်းပူးနေကြပြီး၊ အချို့ လုပ်ငန်းခွင်တွင်ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နေကြသည့်အထိကူညီဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။
American College Program (Global Assessment Certificate) ကို ပြည်တွင်းတွင် (၁)နှစ် ကြာတက်ရောက်ရမည်ဖြစ်ပြီး အဆိုပါ ပရိုဂရမ်သည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ တက္ကသိုလ်များအပါအဝင် သြစတြေးလျ၊ ကနေဒါ၊ စင်ကာပူ၊ အင်္ဂလန် တက္ကသိုလ်များမှ Foundation အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုထားပါသည်၊၊ အဆိုပါ တက္ကသိုလ်များတွင် Foundationတက်ရောက်ရန် မလိုအပ်တော့ဘဲ တက္ကသိုလ်ပထမနှစ်(တစ်ချို့ တက္ကသိုလ်များတွင် ဒုတိယနှစ်အထိတိုက်ရိုက်) တက်ရောက်ခွင့်ရရှိမည့် ပရိုဂရမ်ဖြစ်ပါသည်၊၊
မြန်မာနိုင်ငံမှကျောင်းသူကျောင်းသားအများစုသည်အလွတ်ကျက်မှတ်သည့်စနစ်မှကြီးပြင်းလာသည့်အတွက်၊ မိမိဝါသနာကိုသိရှိရန်ခက်ခဲလေ့ရှိပါသည်။ မိမိတို့ဝါသနာ၊ ဗီဇကိုသိရှိနိုင်ရန်မှန်ကန်သော လေ့လာသင်ယူမှုနှင့်၊ ပြည့်စုံသောဘာသာရပ်များကိုလေ့လာသင်ကြားခွင့်ရမှသာ၊ ဆုံးဖြတ်ရန်လွယ်ကူနိုင်ပါသည်။
နိုင်ငံတကာ တက္ကသိုလ်များတွင် ကျောင်းသားများလိုအပ်မည့် Academic Knowledge, Academic English, Mathematics, Computing, Business,Science & Social Science, Psychology, Communication Skills နှင့် Study Skills for Independent Learning Skills များအပြင် IELTS သို့ TOEFL ဖြေဆိုနိုင်ရန် တစ်ပါတည်း ပြင်ဆင်ပေးမည့် ပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်၊၊
နိုင်ငံတကာ တက္ကသိုလ်များတွင် ဆက်လက်တက်ရောက်နိုင်ရန် Credit / GPA ဖြင့် အမှတ်စာရင်းထုတ်ပေးသဖြင့် မိမိတို့ တက်ရောက်လိုသည့် တက္ကသိုလ်များ၏ ၀င်ခွင့်သတ်မှတ်ချက်များကို ကြိုတင်သိရှိကာ တိကျစွာ ပြင်ဆင်နိုင်ပါသည်၊၊ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများမှာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှ ရေးဆွဲသည့်သင်ရိုးညွှန်းတမ်း ဖြစ်ပြီး အမေရိကန်မှ စစ်ဆေးသော စာမေးပွဲကို ဖြေဆိုရမည်ဖြစ်သဖြင့် ကျောင်းသား ကျောင်းသူများ၏ အရည်အသွေးကို စဉ်ဆက်မပြတ် တိုင်းတာနိုင်ပါသည်၊၊
၄င်းပရိုဂရမ်သည် GCE’A’ အဆင့်နှင့်ညီမျှကာ SAT (Scholastic Assessment Test I/II) ထပ်မံပြင်ဆင်ရန်မလိုအပ်ပဲ ထူးချွန်သောကျောင်းသား ကျောင်းသူများအတွက် အမေရိကန်နှင့် အင်္ဂလန်တက္ကသိုလ်များတွင် ပညာသင်ဆု ဆက်လက်လျှောက်ပေးမည့် အစီအစဉ်ပါ၀င်ပါသည်၊၊ ကျောင်းသား ကျောင်းသူများအနေဖြင့် အမေရိကန်တက္ကသိုလ်များသို့ ပညာသင်ဆုများ လျှောက်ထားရာတွင် လိုအပ်သော ACT Assessment Test ကို ရွေးချယ်သင်ယူနိုင်ပါသည်၊၊
iGCSE နှင့် မြန်မာ (၁၀)တန်းကျောင်းသူကျောင်းသားများအတွက် အသင့်တော်ဆုံး University Preparation Program
မြန်မာနိုင်ငံမှ iGCSE ဖြေဆိုထားသောကျောင်းသားများသည် Grade 11 နှင့်သာညီမျှသည့်အတွက်၊ နိုင်ငံကြီးများမှ တက္ကသိုလ်ကြီးတစ်ချို့ တွင် တိုက်ရိုက်တက္ကသိုလ်သို့လျောက်ထားရန် အဆင်မပြေမှုများတွေ့ကြုံရလေ့ရှိပါသည်။ ဤပရိုဂရမ်သင်ယူပါက Grade 12 အဖြစ်ညီမျှသွားသည့်အပြင် GCE’A’၊ SAT စသည့်စာမေးပွဲများထပ်မံလေ့လာဖြေဆိုရန်မလို အပ်တော့သည့်အပြင်၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင်လေ့လာသင်ယူစဉ်အတွင်း၊ ဘာသာရပ်ဆုံးဖြတ်ရန်မလိုသေးပဲ၊ ဤပရိုဂရမ်ပြီးဆုံးမှ အင်ဂျင်နီယာ၊ စီးပွားရေး၊ကွန်ပျူတာ၊ အာခီ၊စသဖြင့် မိမိတို့ နှစ်သက်ရာနိုင်ငံအသီးသီး၏ တက္ကသိုလ်များတွင်လေ့လာသင်ယူနိင်ပါသည်။ မိဘများအနေဖြင့်လည်း ကုန်ကျစရိတ်များစွာ သက်သာနိုင်သည့်အပြင် မိမိတို့ကလေးများကိုလည်း မြန်မာနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံတကာပညာရေးစံချိန်စံညွှန်း များအတိုင်း ကောင်းမွန်စွာပြင်ဆင်ပေးလိုက်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်၊၊
ထို့အပြင် မြန်မာအစိုးရကျောင်းထွက်ကျောင်းသူကျောင်းသားများသည့် အင်္ဂလိပ်စာအားနည်းခြင်း၊ Presentation လုပ်သည့် အတွေ့အကြံုများမရှိခြင်း၊ စာကြိုးစား၊ တော်လေ့ရှိကြသော်လည်း မိကိုယ်ကိုယ်မိမိယုံကြည်အားနည်းခြင်း၊ မိဘများအပေါ်မှီခိုလွန်းခြင်းစသည့် အားနည်းချက်လေးများတွေ့ရလေ့ရှိသည်။ နိုင်ငံတကာတွင်ပညာလေ့လာသင်ယူရန် အဆိုပါအားနည်းချက်များကို ဤပရိုဂရမ်မှ အကောင်းဆုံးကြိုးစားပြင်ဆင်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
This American College Program has been known as Global Assessment Certificate (GAC) and awarded by ACT, USA.
CREDIT AND SCHOLARSHIPS
GAC001 Academic English I: Listening & Speaking Skills 40 20 60
GAC002 Academic English I: Reading & Writing Skills 40 20 60
GAC003 Study Skills for Independent Learning 40 20 60
GAC004 Mathematics I: Fundamentals 40 20 60
GAC005 Computing I: Introduction to Computing for Academic Study 40 20 60
GAC006 Business, Science & Social Science I: Communication Skills 40 20 60
GAC007 Academic English II: Listening & Speaking Skills 40 20 60
GAC008 Academic English II: Reading & Writing Skills 40 20 60
GAC010 Mathematics II: Probability, Statistics & Finance 40 20 60
GAC011 Computing II: Data Management 40 20 60
GAC012 Business II: Business Studies 40 20 60
GAC013 Science II: Scientific Principles 40 20 60
GAC027 Social Science II: Identity & Interaction in Society 40 20 60
GAC019 IELTS™ Preparation Skills 40 20 60
GAC025 TOEFL® Preparation Skills 40 20 60
GAC014 Academic English III: Listening & Speaking Skills 40 20 60
GAC015 Academic English III: Reading & Writing Skills 40 20 60
GAC016 Mathematics III: Calculus & Advanced Applications 40 20 60
GAC017 Computing III: Digital Communication 40 20 60
GAC022 Business III: International Business Studies 40 20 60
GAC023 Science III: General Science 40 20 60
GAC028 Social Science III: Research Skills and Global Issues 40 20 60
GAC026 ACT® Preparation Skills 40 20 60
GAC024 Discrete Mathematics 40 20 60
ဤပရိုဂရမ်ပြီးဆုံးပါက၊ စင်္ကာပူ၊ အင်္ဂလန်၊သြစတြေလျ၊ အမေရိကန်၊ ထိုင်း၊ မလေးရှား၊ ဂျပန်၊ကိုရီးယား၊နိုင်ငံတို့တွင် ဆက်လက်ပညာသင်လေ့လာနိုင်ပြီး၊ နိုင်ငံနှင့်တက္ကသိုလ်စာရင်းအသေးစိတ်ကို အောက်ပါ မူရင်းလင့်ခ်တွင်ကြည့်ရှု့ နိုင်ပါသည်။
No. 275, 3rd Floor, KBZ Tower, Pyay Road, Myaynigone, Yangon
01- 527 838 , 09 445566 701, 097999 999 77